Xhumana nathi - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Ikheli: No. 999 Fushan Road, Xiaolan Economic Zone, Nanchang City, Jiangxi 330200, PR China
UMsombuluko-ISonto: amahora angama-24 ku-inthanethi
Kungumkhiqizi ochwepheshe osebenza ngocwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokusebenza kwamadivayisi ezokwelapha. Yinkapani ephethwe ngokuphelele yiJiangxi Sanxin Medical Technology Co, Ltd. (isifinyezo: Sanxin Medical, stock code: 300453), neYunnan Sanxin egxilile eYunnan izosiza ekuthuthukiseni imboni yezokwelapha yasendaweni kanye nezinsizakalo zezokwelapha; ngasikhathi sinye, izokwenza umsebenzi omuhle njenge- "bridgehead" yokwakheka kweSanxin Medical eningizimu-ntshonalanga, ekhanyisa iNingizimu Asia kanye ne-Southeast Asia. Le nkampani isendaweni yaseKirin e-Anning Industrial Park, eKunming City, esifundazweni saseYunnan, enendawo ephelele engaphezu kwamamitha-skwele angama-60,000; ikhiqiza kakhulu ukulahlwa okuphezulu kokucushwa kokungena kanye nemikhiqizo yochungechunge lokuhlanzwa kwegazi.
Kuyinto ibhizinisi kazwelonke zobuchwepheshe onguchwepheshe ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, yokuthengisa kanye nokwesekwa lobuchwepheshe hemodialysis uchungechunge imishini yezokwelapha. Ungumhlinzeki wemishini ye-hemodialysis esezingeni lomhlaba jikelele nezixazululo.
Isungulwe ngo-Agasti 2018, inenhlokodolobha ebhalisiwe engu-12 million yuan, igxile ekuhlinzekeni ukugcinwa, ukusatshalaliswa, ukuphathwa kokuthengwa kwempahla kanye nezinye izinsiza zokuhlinzekwa kwezinkampani zokwakha nezinkampani ezisebenzayo. Le nkampani isendaweni kazwelonke ye-Xiaolan Economic and Technological Development Zone futhi iyinkampani ephethwe ngokuphelele yiJiangxi Sanxin Medical Technology Co, Ltd. (ikhodi yesitokwe: 300453).
Le nkampani ikakhulu benza ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa kanye nokuphathwa imishini yezokwelapha; ibhizinisi lokungenisa izinto zokusetshenziswa eziluhlaza nezisizayo, imishini yokusebenza, izinsimbi zomculo, izingxenye ezisele kanye nobuchwepheshe obuhlobene obudingekayo ekukhiqizeni nasekucwaningweni kwesayensi kwenkampani, kanye nokusebenza kwezinto zangaphandle zenkampani.
I-Ningbo Filal Medical Products Co, Ltd ibhizinisi eligxile ku-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo yokuhlinza elahlwayo ye-cardiothoracic. Ikhiqiza izihlungi zegazi ezigcina ngokulahlwa, izihlungi zegazi ezilahlwayo ze-microembolism, namaphaphu enhliziyo yokufakelwa alahlwayo. Iphakethe leshubhu le-extracorporeal circulation tubing (i-extracorporeal circulation tubing), amadivayisi alahlwayo abandayo we-cardioplegia perfusion neminye imikhiqizo ithengiswa ezibhedlela ezinkulu ezweni lonke, futhi isetshenziswe emitholampilo ezibhedlela ezingaphezu kwezingu-300, futhi konke kube nemiphumela engathandeki. Ikhwalithi yomkhiqizo iphakathi kwabaphambili embonini futhi inegama elihle phakathi kwabasebenzisi.
ISichuan Weilisheng Medical Technology Co, Ltd. ("iSichuan Weilisheng" ngamafuphi), eyasungulwa ngonyaka we-2018, ibhizinisi elisezingeni eliphezulu elisebenza ngocwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokuhlinzekwa kwamadivayisi ezokwelapha. ISichuan Weilisheng yinkampani ephethwe ngokuphelele yiJiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (ikhodi yesitoko: 300453). Ngemuva kwephethini yentuthuko yezimboni kaSanxin kusuka eningizimu kuye enyakatho, inenye indlela yokuhlelwa kwezezimboni empumalanga kuya entshonalanga, ethembele ku-Chengdu Njengesikhungo esibalulekile sohlelo lwe "Belt and Road", sizibophezele ekubeni ngumhlinzeki wepulatifomu ohola phambili wokuhlanza igazi emisha, ubuhlakani nekhwalithi, kuqinisa ithonya lamazwe omhlaba lemikhiqizo kazwelonke.